लघुकथा : निलो पेटिकोट - Vishwa News
09-Apr-2020 | २७ चैत्र २०७६, बिहीबार
लघुकथा : निलो पेटिकोट
प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ, कीर्तिपुर
शिशिर याम । बाहिर हुस्सुको बाक्लो पर्दा । अफिस जाने तर्खरमा थिएँ । श्रीमती कोठामा आइन् र सुइटरको गला मिलाउँदै बोली; ‘एउटा पेटिकोट किन्नु पर्ने, सबै पुरानिसके ।’
– कस्ले देख्या हुन्छ र पेटिकोटलाई, भित्र लाउने त हो नि, के पुरानो, के नयाँ ?’
‘त्यसो भनेर हुन्छ ? नयाँ लगायो भने जोश पनि नयाँ आउँछ । एउटा पेटिकोट किनेर ल्याउनुस् भरे असनबाट आउँदा !’ श्रीमती कर्की ।
‘श्रीमतीको पेटिकोट किन्ने ठेक्का लिएर बसेको छु र ?’ म पनि कर्कें । श्रीमती केही बोलिन । म सरासर आफ्नो अफिसको बाटो नापेँ ।
असनको गल्लीलाई दिनको दुईपटक कुल्चेर हिँड्ने मेरो दैनिकी थियो । बेलुका घर फर्किने क्रममा श्रीमतीको पेटिकोटको मागलाई झल्यास्स सम्झेँ । असनमा पूरै बजार लागिरहेको थियो । अलि सस्तोमा देलाकि भन्ने आलसामा मधेशीको दोकानमा पुगें । – साहुजी पेटिकोट हेरौँ न ? भन्दा एउटा फुच्चेले विभिन्न रंगका पेटिकोटहरु भुइँभरि असरल्ल ओछ्यायो । मैले नीलो रंगको पेटिकोट अट्ठ्याएँ । बार्गेनिङ्ग गर्ने क्रममा डेढ सय रुपैँयामा मोल मिल्यो । एउटा झोलामा पोका पारेँ अनि लुखुरलुखुर घरतिर आएँ ।
घर पुग्दा साँझको सात बजिसकेको थियो । श्रीमतीसँग भात खाइवरी कोठामा आएँ अनि आफ्नो पोका फुकाएँ । उस्ले त्यो नीलो पेटिकोट ओल्टाइ–पल्टाइ हेरी र पेटिकोट लगाएर ऐनामा खुब आफूलाई नियाल्न थाली । अनि मेरो छेउ आई । मलाई कैल्यै नबुनेको “अँगालोको एक न्यानो सुइटर” बुनेर लगाइदिई, त्यो पनि शिशिर यामको मुटु कँपाउने जाडोमा राहत मिल्ने गरी । मेरो गालामा आफ्नो लिपिस्टिक पनि छापी । ज्यादै सुखको अनुभूति भयो । सोचेँ, डेढ सय रुपैँयाले पनि दाम्पत्य जीवनमा यस्तो खुसी ल्याउँदो रहेछ ! उनी मलाई थप एक बोनस कसिलो चुप्प गरेर कोल्टे फेरी । म आँखा बन्द गर्दै सोचिरहें… सुहागरात भन्दा मीठो रातलाई म के नाम दिऊँ ? अनि आफैले बिहान बोलेको वाक्य सम्झेर मुसुक्क हाँसे, कस्ले देख्या हुन्छ र पेटिकोटलाई, भित्र लाउने त हो नि, के पुरानो, के नयाँ ?
आँखा यसो खोल्दा नीलो पेटिकोट कहीँ थिएन । बाँकी थियो त श्रीमती र म मात्र । खाटको एक कुनातिर गुजुल्टिएर थुप्रेको पेटिकोटलाई मनमनै आभार व्यक्त गरें ।
सिरक तानेर दुबैलाई ढाकें ।
बिहान म व्युँझदा उनी कोठामा देखिन । निलो पेटिकोट सिसाको शो-केस भित्र सम्मानित अवस्थामा देखें ।
बेलायतको हाउस अफ लर्डसबाट भ्रमण वर्षको घोषणा
मान्छे मारेर भागेका व्यक्ति ३४ वर्षपछि पक्राउ
मिङ्मा दोर्ची शेर्पाका नाममा छिटो सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान
बहराइनमा नेपालीमाथि बढ्दो संक्रमण, २२ जनामा पुग्यो कोरोना संक्रमण
कोरोना संक्रमित १५ लाख नाघे, अमेरिकामा एकै दिन १९ सयको मृत्यु
विश्व स्वास्थ्य संगठनको ट्रम्पलाई जवाफ, महामारीलाई राजनीतिकरण नगर
अवैतनिक वाणिज्यदूतको कूटनीतिक सुविधा खोसियो
न्यूयोर्कबाट देखेको कोरोना र अमेरिका
सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स राष्ट्रपतिय होडबाट बाहिरिए, पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन र ट्रम्पको प्रतिश्पर्धा निश्चित
कोरोनाका कारण विदेशमा ८ नेपालीको गयो ज्यान
वुहानमा खुल्यो लकडाउन, रेल र एयरलाइन्स सुचारु
प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाका प्रश्नै-प्रश्न
कोरोना संकटका बेला पनि सेवामा नखट्ने ५ डाक्टर निलम्बित
१०९९ मा काम गर्नेले आयका आधारमा होइन सिधा साताको ६०० डलर मात्र पाउँछन् : सिपिए विराज रिजालको अन्तर्वार्ता
कोरोना महामारीमा पनि ट्याक्सी चलाएका न्युयोर्क सहरका : एक चालकको पिडादायी कथा
कोरोना कहर- न्यूयोर्कमा अस्पतालका शवगृह भरिए सार्वजनिक ठाउँमा अल्पकालिन शवगृह बनाइने